Maxaa Dhacay Markii Ay Xalay Iska Hor Yimaaddeen Ronaldo Iyo Ramos Oo Aan Muddo LABA Sannadood Ah U Wada Hadal Luka Modric Dartii - Gool24.Net
Maxaa Dhacay Markii Ay Xalay Iska Hor Yimaaddeen Ronaldo Iyo Ramos Oo Aan Muddo LABA Sannadood Ah U Wada Hadal Luka Modric Dartii
Cristiano Ronaldo iyo Sergio Ramos ayaa meesha ka saaray khilaafkii u dhexeeyey markii ay saaxiibbadan hore ee mar u wada ciyaari jiray Real Madrid iskaga hor yimaaddeen kulankii saaxiibtinimo ee Portugal iyo Spain ay xalay ku kala baxeen 0-0.
Sagaal sannadood oo ay u wada ciyaarayeen Real Madrid oo ay saaxiibo ahaayeen, ayaa waxa u beddelay muddo laba sannadood ah oo aanay wada-hadal kaddib markii uu laacibka reer Portugal u wareegay Juventus, isla markaana uu khilaaf dhexdooda yimid.
Khilaafkooda ayaa waxa uu ka dhashay markii uu Ronaldo ka falceliyey, isla markaana cadho ka muujiyey abaal-marinta Ballon d’Or oo la siiyey Luka Modric sannadkii 2018kii, taas oo Ramos uu dhibsaday, isaguna si cad ula saftay saaxiibkiisa Modric ee ay Real Madrid kusii wada sugnaayeen.
Cristiano Ronaldo oo Portugal ugu soo bilowday ciyaarta kulankii xalay ayaanay garoonka gudaheeda isku soo gaadhin Ramos oo garoonka soo galay daqiiqaddii 82aad xilli uu Cristiano 11 daqiiqadood ka hor beddel ku baxay.
Markii ay ciyaartu dhamaatay ayuu kabtanka Spain ee Ramos bartiisa bulshada soo dhigay sawir uu qolka lebbiska kula galay Cristiano Ronaldo iyo saaxiibkiisii hore ee Pepe ee ay difaaca Real Madrid wada taagnaan jireen, waxaanu kusoo dul-qoray hadal uu ku muujinayo inay is-laab xaadheen.
“Wali waanu wada joognaa… wax badanna wuu soo socdaa! Waan ku faraxsanahay inaan idin arko, saaxiibayaal.” Ayuu Sergio Ramos kusoo qoray bartiisa bulshada.
Ronaldo iyo Ramos ayaa waxay wada galeen hal sawir oo ay gacanta ku wada hayaan garanka Cristiano Ronaldo, halka uu Pepe garabka haystay CR7.